Tom Hanks wuxuu ku soo laabtay Apple TV + isagoo wata filimka sheekooyinka sayniska ee Finch | Wararka IPhone
Wararkii ugu dambeeyay ee la xiriira adeegga fiidiyowga ee 'Apple', waxaan ka helnay, markale, dhexda Deadline. Sida ku cad daabacaaddan, Apple waxay heshay xuquuqda filimka soo socda ee Tom Hanks, oo ah filim khiyaali saynis ah Waxaa lagu soo bandhigi doonaa Apple TV + kahor dhamaadka sanadka.
Cinwaan looga dhigay Finch (inkasta oo markii hore loo bixin lahaa BIOS), filimku wuxuu ku wareegayaa nin, aalado iyo eey sameeya qoys aan caadi ahayn. Tom Hanks wuxuu ciyaaraa Finch, oo ah injineer robot ah yaa wuxuu ku noolaa dhufeyska dhulka hoostiisa muddo ka badan toban sano ka dib markii uu ka mid ahaa dadka faro ku tiriska ah ee ka badbaaday masiibada qorraxda, ee dhulka ka dhigtay meel cidla ah.
Si uu waqtigiisa dhulka hoostiisa uga dhigo mid la qaadan karo, wuxuu dhisay aalado uu ku daryeelo eeygiisa Goodyear markuu awoodi kari waayo. Saddexda qaybood ee qoyskan aan caadiga ahayn Waxay galayaan safar haliso badan oo ay ku tagayaan Galbeedka Mareykanka ee tabarta daran taas oo Finch ay ku ogaato farxadda sii noolaanshaha iyo ka badbaaday musiibada qorraxda.
Finch waxaa Director ka ah Miguel Sapochnik, oo Director ka noqday qaar ka mid ah dhacdooyinkii ugu xiisaha badnaa ee taxanaha Ciyaarta carshiga iyo kuwa leh wuxuu ku guuleystay labadii abaalmarin ee ugu horreysay Emmy, marka lagu daro cutubyada kala duwan ee taxanaha sida Aqalka, maradiisa, Dambi-baare True y Kaarboon la beddelay
Qoraalka waxaa qoray Craig Luck iyo Ivor Power. In wax soo saarka fulinta waxaan ka heli Robert Zemeckis, agaasimaha filimka Miguel Sapochnik, Andy Berman iyo Adam Merims.
Iyadoo Finch, tan Waa filimkii labaad ee Tom Hanks ah kaas oo ka soo muuqan doona Apple TV +, Greyhound ka dib, filim loo magacaabay Oscar qaybta codka ugu fiican.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Tom Hanks wuxuu ku soo laabtay Apple TV + isagoo wata filim saynis ah Finch
Ciyaaraha Apple iyo Epic waxay ka fikireen inay soo bandhigaan xirmo macaamiil oo ay ku jiraan Club Fornite, Apple TV + iyo Apple Music